Pierre-Emerick Aubameyang oo kala hadlay Zidane ku biirista Real Madrid – Gool FM
(London) 29 Mar 2020. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ku wargeliyay Pierre-Emerick Aubameyang inuu ku jiro qorshihiisa suuqa xagaaga, balse uusan u ahayn bartilmaameedka koowaad ee kooxdiisa.
Laacibka reer Gabon ayaa lagu soo warramayaa in Los Blancos ay u dhaqaaqi doonto haddii ay ku guuldarreysato soo xero gelinta xiddiga Liverpool ee Sadio Mane iyo weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Macallin Zizou ayaa Aubameyang u sheegay inuu yahay qorshihiisa labaad, balse marka hore uu door bidayo xiddigaha aan kor ku soo xusnay sida warinayso Jariiradda Express Sport.
Weeraryahanka Gunners ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah kooxo badan oo qaaradda Yurub ka dhisan maadaama uu galay sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa garoonka Emirates.
Maadaama Real Madrid uu u soo iftiimi waayay Luka Jovic oo xagaagii hore ay la soo saxiixdeen, kooxda La Liga ciyaarta ayaa baadi goob kale u galeysa gooldhaliye la isku halleyn karo, iyagoo hadda bartilmaameed ka dhiganaya Aubameyang oo 20 gool xilli ciyaareedkan u dhaliyay Arsenal dhammaan tartammada.
Laacibkii hore ee BVB ayaa 97 kulan u ciyaaray kooxda Gunners, isagoo u dhaliyay 61 gool, sidoo kalena caawiyay 13 kale, waxaana fasal ciyaareedkan uu booska labaad ka fadhiyaa kala sarreynta gooldhalinta horyaalka Premier League.